Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Ghanian Jordan Ayew Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Ihe omuma anyi nke Jordan Ayew na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, Nku ya, ezi na ulo, ndi nne na nna, nwunye, umuaka, nke bara uru, ndu ya na ndu onwe onye.
Na nkenke, anyị na-egosipụta akụkọ ihe mere eme nke ndị egwuregwu bọọlụ Ghanian. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na Liverpool.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị sie ike, nke a bụ igbe nnabata iji bulie gallery - nchịkọta zuru oke nke Jordan Ayew's Bio.
Ndụ na mbili nke Jordan Ayew.
Ee, onye ọ bụla maara nke egwuregwu slick ya na ike ijikwa nrụgide. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị akụkọ ndụ anyị na Jordan Ayew nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido
Jordan Ayew Childhood Akụkọ:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “Onwe." Jordan Pierre Ayew a mụrụ na 11th ụbọchị Septemba 1991 na mpaghara Marseille na France.
Ọ bụ nke atọ n'ime ụmụ anọ nne ya mụrụ, Maha Ayew na nna ya, Abedi Pele (ọkachamara na-egwu egwuregwu n'oge ahụ).
Ndị nne na nna Jordan Ayew bụ Abedi na Maha.
Onye Ghanian na French nke agbụrụ ojii na agbụrụ ndị ezinụlọ nke West Africa bụ ndị ebulitere na mbụ na nzụlite ezinụlọ na Ghana na ebe o toro na nwanne ya nwoke Andre Ayew na obere nwanne Imani Ayew.
“Ndị nne na nna m ochie zụlitere m na Ghana n’ihi na nne m na nwanne m nwoke nke tọrọ m bụ Ibrahim Ayew sooro nna m gaa ebe ọ bụla ọ bụla kwekọrọ na mkpa nke ọrụ ịgba bọl ọkachamara. Ọbụghị mgbe ụbọchị ikpeazụ nke ọrụ nna m gasịrị ka e kwere ka m soro ya ”.
O chetara Jọdan banyere nzụlite ya.
A zụlitere Jordan Ayew na Ghana n'oge ọ bụ nwata. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
N'ihi ya, ọ bụ ihe dị mma na nwata Ayew tolitere na-ele Egwuregwu Football na telivishọn iji nweta foto nke ọrụ nna ya.
Ewezuga ikiri egwuregwu, enyere Ayew ka ya na nwanne ya nwoke nke nta na ndị enyi na-egwu bọl na-enweghị nrụgide iji egwuregwu ahụ kpọrọ ihe ma ọ bụ nrọ nke ịbụ ọkachamara n'ịgba ọsọ dịka nna ya.
Jordan Ayew Mmụta:
Ka ọ na-erule oge Ayew dị afọ 9, ịhụnanya nna ya maka bọọlụ amalarị nna ya - maka afọ iri ọ fọrọ nke nta ka ọ rụọ ọrụ na France - mere ka nwatakịrị ahụ banye na ụlọ akwụkwọ ntorobịa Lyon-Duchère.
Jordan Ayew gbara afọ 9 mgbe ọ malitere ọrụ aka ya na Lyon-Duchère '. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Ọ bụ na ụlọ akwụkwọ nwata ma ọ bụ klọb nwoke ka Ayew nọrọ afọ isii iji mụta ihe, na-ejikwa ụzụ aka ya ma kee akpụkpọ ụkwụ ya dị njikere maka ọrụ ọ na-amaghị na ọ ga-ewe ya n'ọnọdụ malite na Marseille.
Jordan Ayew Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Ayew bụ naanị nwata nwoke 13 mgbe ọ kwagara na usoro ndị ntorobịa Marseille bịara ịkụ aka n'ọnụ ụzọ ya.
Ọ bụ ezie na Marseille nwere iwu na-eguzo ọtọ nke chọrọ ka ndị na-eto eto na-atụgharị 15 tupu ha abanye na ụlọ akwụkwọ mmuta ha, ụlọ ọrụ French ahụ kwadoro iwu nke aka ha iji kpoo ọkụ ọkụ na-ama ifuru ma jiri obi ụtọ na-ele ya ka ọ na-agbago.
Na-ebili na ọkwa: Foto a na-adịghị ahụkebe nke Jordan Ayew na Marseille.
Egwuregwu bọọlụ mgbe ahụ mere ka ọ rịgoro na bọọlụ nke mbụ mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Marseille n'afọ 2009.
Ọ gara n'ihu mee klọb klọb ya na mbọ ntinye aka nke nyeere Marseille aka ịdekọ 2-1 Ligue 1 mmeri Lorient na 16th nke December 2009.
Jordan Ayew Bio - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ na Ayew nwere ọtụtụ ndị dị elu na Marseille ma nwee ọfụma nke ọma mgbe enyere ya ego na Sochaux.
A chọpụtaghị na ọ nwere ụkọ mgbe ya na Lorient na-asụkọ otu afọ n'oge oge 2014-2015.
Mgbe nke ahụ gasịrị, Ayew ji nwayọọ nwayọọ banye n'ime abyss nke nsogbu ịma aka mgbe ọ sonyeere Aston Villa mana ọ nweghị ike inyere ndị Bekee aka izere ọpụpụ.
Ọ nweghịkwa ike ịkọwa ihe kpatara obodo Swansea ji laa azụ otu afọ mgbe ọ sonyeere ọgbakọ.
Swansea banyere na ọpụpụ ekwupụtaghị nke ọma banyere ndị na-eti klọb gụnyere Ayew. Ebe E Si Nweta Foto: Enyo.
Jordan Ayew Biography Eziokwu - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Ọganihu ahụ mechara chọta ihe mere ọ ga-eji na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe ọ sonyere Crystal Palace na mbinye ego maka oge 2018-19 ma nye ndị Glaziers ihe doro anya na ọ bụ onye na-eti ihe na ha chọrọ ma kwesịkwa.
N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya mgbe ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara na ọ nwetala mbinye aka Ayew maka nkwekọrịta afọ atọ na 25th nke July 2019.
Jordan Ayew bịanyere aka na nkwekọrịta afọ atọ na Crystal Palace na 25th nke July 2019. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Ọsọ ọsọ gaa n'oge edere, Ayew enwetawo ọnọdụ ya n'etiti ndị isi ọkaibe kachasị mma nke Crystal dị ka ihe doro anya na njikwa bọọlụ ya na-adọrọ adọrọ maka inye ndị na-agbachitere oge efu na bọl.
Kedu ihe ọzọ? Fans na-amalite ikpo ọkụ ruo Ayew n'ihi na ha maara nke ọma na efu nke onye ọkpụkpọ ahụ ga-ebute site na nkwụsi ike ya iji mee ihe kachasị mma maka klọb ahụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Jordan Ayew Biography Eziokwu - Mmekọrịta Ndụ Eziokwu:
Ewezuga akụkọ iku ume nke Ayew, ihe mere na ndụ ịhụnanya ya mere isi akụkọ na 2015 mgbe a boro ya na ya na otu onye Amanda maara na ọ bụ nwunye nke onye agbụrụ Ghanian - Afriyie Acquah.
Esemokwu a gbasara ebe niile mgbe ụda onyogho a na-akọ si Amada pụta, mee ka okwupụta na ya bụ enyi nwanyị Ayew, onye hụrụ ya n'anya na onye fọrọ obere ka ọ bụrụ nwunye.
E boro Jordan Ayew ebubo na ya na nwunye Afriyie Acquah bụ Amanda nwere mmekọrịta ịhụnanya.
Agbanyeghị Ayew bụ - n'oge edere - lụrụ ọmarịcha enyi ya nwanyị ghọrọ nwunye Denise, amabeghị ọtụtụ ihe gbasara oge di na nwunye bidoro ịlụ ma ọ bụ gafee wara wara. Alụmdi na nwunye na-aga n'ihu na Denise gọziri ụmụ abụọ. Ha gụnyere nwa nwanyị a ma ama na obere nwa nwoke.
Jordan Ayew na nwunye ya Denise na ụmụ mara mma. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Jordan Ayew Ndụ Ezinụlọ:
Chee echiche banyere ndị ọkachamara bọọlụ ole na ole na-agụ ezinụlọ ha dịka ngọzi, chee echiche banyere Jordan Ayew ma chọpụta site n'eziokwu banyere ndị otu ezinụlọ bidoro site na nne na nna ya hụrụ n'anya.
Banyere Jordan Ayew nna:
Abedi Ayew bụ papa Jọdan. A mụrụ ya na 5th nke November 1964 ma rụọ ọrụ dị ka onye ọkpụkpọ egwuregwu ọkachamara maka akụkụ ka mma nke ndụ nwata Jọdan.
Nna nke 4 bu - n'oge edere - onye isi nchịkwa na onye isi oche nke ndị otu egwuregwu bọọlụ Ghana bụ Nania FC.
Dika ihe nlere anya nke ndi nna, Abedi di nso na umuaka ya karia umuaka ya nwoke ndi onye o nyere aka ka ha buru ndi n’egwuregwu football.
Foto tụfuru Jordan Ayew na nna ya Abedi Pele. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Banyere Jordan Ayew:
Maha Ayew bụ nne Jọdan. Dị ka di ya, Maha sitere na mgbọrọgwụ ezinụlọ nke West Africa.
Ọ bụ ezie na Maha bụ onye ntụzi na onye nwe ụlọ nke Nania Football Club, ọ na - ewepụta oge iji soro ụmụ ya nyere ya aka ịzụlite.
Obi dịkwa ya ụtọ maka ihe ha toro ma hapụ ịkwụsị inye ha nkwado ya na-enweghị atụ.
Mama Jordan Ayew na nwanne ya nwoke Andre.
Banyere ụmụnne Jordan Ayew:
Jordan nwere nwanne nna nne na nna okenye nke aha ya bụ Ibrahim Ayew yana ụmụnne abụọ ndị obere akpọrọ Andrew Ayew & Imani Ayew.
Dị ka Jọdan, Ibrahim bụ ọkachamara n’egwuregwu bọọlụ. Ọ na-egwuri egwu maka Europa FC dị ka onye na-eche nche midfielder.
Nwanne nwoke nke okenye Jordan Ayew, Ibrahim.
N'akụkụ ya, Andre bụkwa ọkachamara na ịgba egwuregwu nke na-ekwupụta azụmahịa ya na Swansea City n'oge ederede. Brothersmụnna niile nọrịtara ibe ha nso ma na-ekene naanị nwanne ha nwanyị Imani bụ onye ejiji.
Jordan Ayew na nwanne ya nwanyị Imani na nwanne nwoke Andre.
Banyere ndị ikwu Jordan Ayew: Gafere na ndụ ezinụlọ ezinụlọ nke Jordan Ayew, amachaghị banyere nna nna ya karịa nne na nna ya ochie yana nna nna na nne nne.
O nwere nwanne nne nna ama ama ama ama ama ama - Kwame Ayew yana nwanne nwanyị a na-akpọ Inaya Ayew.
Enweghi ndekọ dị ugbu a banyere nwanne nne na nna ya na nwanne nne ya ebe amabeghị nwa nwanne ya n'oge edere akụkọ ndụ a.
Nwanne nna Jordan Ayew Kwame.
Jordan Ayew Ndụ Nke Onwe:
Àgwà ndị na-akọwa Jordan Ayew bụ nke Virgo zodiac ịrịba ama. Ha gụnyere ikike ya maka ịrụsi ọrụ ike, mmesapụ aka na nchekwube.
Na mgbakwunye, o nwere onye na-atọ ọchị ma ghara ịkọwapụta nkọwa metụtara ndụ ya na nke onwe ya.
Banyere ọdịmma na ntụrụndụ nke Ayew, o nwere ọtụtụ ọrụ mmemme nke gụnyere ịge egwu, ile ihe nkiri, njem, ilele yana iwepụta oge iji soro ezinụlọ ya na ndị enyi ya na-eme ọmarịcha oge nọrọ.
Nlegharị anya bụ otu n'ime mmasị na ihe omume ntụrụndụ nke Jordan Ayew.
Jordan Ayew Web site Web:
You mara na Jordan Ayew nwere ọnụọgụ ego ruru $ 2.3 nde n'oge edere Bio a.
Ihe ndị metụtara akụnụba ya na-esite na ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta maka ịgba bọl na-agba elu ebe nyocha banyere ụzọ o si emefu ego na-egosi na ọ na-ebi ndụ okomoko.
Ndị na-egosi ntụnyere ibi ndụ okomoko nke Ayew gụnyere ụdị dị iche iche nke ụgbọ ala dị oke ọnụ nke ọ na-eji agagharị n'okporo ámá London na Ghana.
Na mgbakwunye, onye egwu ahụ nwere obere ụlọ dị oke ọnụ mara na Ghana yana ibi na ụlọ okomoko na London.
Jordan Ayew na-egosi n'akụkụ ụgbọ ala Mercedes ya.
Jordan Ayew Eziokwu:
Kedu ka ị maara Jordan Ayew gabigara akụkọ nwata ya na ihe edere banyere ya na ihe ọmụmụ a? Nọdụ ala ka anyị na-ewetara mmadụ ole na ole ị mara nke ọma ma ọ bụ akụkọ na-enweghị isi banyere onye ọkpọ ahụ.
IKPE: Ayew bụ onye na-eme Muslim bụ onye buru ibu na okpukperechi. Agbanyeghị na onye na-eme ihe egwuregwu ahụ anaghị aga okpukpe mgbe a na-agba ajụjụ ọnụ, mmemme mgbaru ọsọ ya na-egosi nsọpụrụ ya maka Chineke na nrara nye Islam.
Jordan Ayew bụ onye na-eme Muslim.
SM SMụ sịga na ị DRụ mmanya: Onye na-eti ihe na-egwu egwu n'egwuregwu bọọlụ mara ihe na-anaghị ese anwụrụ na ị drinkụ mmanya n'oge edere.
Ebumnuche, ihe kpatara Ayew ji azọ ụkwụ n'ụzọ ahụ siri ike, bụ iji hụ na ahụ na-anọ n'ọnọdụ zuru oke iji jikwa ihe egwuregwu bọọlụ elu-elu chọrọ.
EGBUGBU: Jordan Ayew hụrụ egbugbu n'anya ma dee ahụ ya na aka ekpe ya na aka nri ya. Ekwenyere na onye ọkpọ ahụ - onye nwere ogo 6, 0 sentimita asatọ - enweghị akara ọ bụla ọzọ karịa nke dị na ogwe aka ya n'ihi na ejidebeghị ya.
Nwere ike ịhụ akara ahụ na aka ekpe na aka nri Jordan Ayew?
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ gbasara akụkọ nwata anyị, Jordan Ayew Plus Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.